सलमान खान कि पहिलो प्रेमिका अहिलेसम्म नि कुमारी नै छिन। के सलमानलाई नै पर्खेर बसेकी हुन त ? – Dailny NpNews
शुक्रबार ०७ माघ २०७८
प्रधानमन्त्री देउवाले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने
भिजिट भिसामा युएइ गएर काम गर्नेलाई ३ महिना जेल र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना
तपाइले कोभिडको कुन खोप लगाउनुभयो ? अब भेरोसेल खोप लगाउन नपाइने
मौसम झन डरलाग्दो बन्दै तीन दिनसम्म देशभर वर्षा र हिमपातको सम्भावना
माघ १६ देखि विद्यालय खोल्ने सीसीएमसीसीको निर्णय.
टिकटक लाइभले जन्मायो ‘माग्ने सेलिब्रेटी, धेरैको अनुरोध हुन्छ, ‘प्लिज मलाई चस्मा लगाईदिनुस्’
सलमान खान कि पहिलो प्रेमिका अहिलेसम्म नि कुमारी नै छिन। के सलमानलाई नै पर्खेर बसेकी हुन त ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष १४, २०७८ समय: १४:२४:५५
अहिले जताततै सलमान खानको चर्चा छ । कारण सलमान खानकी प्रेमिका मानिने कट्रिना कैफले केही दिनअघि ९ डिसेम्बरमा विवाह गरेकी हुन् । जसका कारण अहिले जताततै दुबैको चर्चा छ । यतिबेला सलमान खानको पर्सनल लाइफको चर्चा जताततै छ, उनले कुन केटीसँग सम्ब,न्ध राखेका छन् । यसै क्रममा सलमान खानको बारेमा यस्तो स,त्य बाहिर आएको छ, जसको बारेमा सायदै कसैलाई थाहा नहोला ।
सलमान खानसँग स,म्बन्ध राख्ने सबै केटीहरूले ऐश्वर्या राय, कट्रिना कैफ यिनिहरु ले त विवाह गरिसके । तर तपाइँको जानकारीको लागि, हामी तपाइँलाई बताउछौं कि सलमान खानकि एक प्रेमिका थिइन उनले अहिलेसम्म विवाह गरेकी छैनन् र उनको प्रे,मको लागि प,र्खिरहेका छन्। सलमान खानकी यी प्रे,मिकाको अनौठो कुरा के छ भने उनी भारतकी होइनन पाकिस्तानकी हुन् । जसको नाम सोमा अली खान हो । यिनले अहिलेसम्म विवाह नगर्नुको कारण पनि बताउँछौँ ।
सलमान खानकी पहिलो प्रे,मिका सोमा अली खान थिइन् । सोमा अली खानको कुरा गर्दा उनी भारतकी होइन पाकिस्तानकी हुन। सोमा अली खानको १६ वर्षको उमेरमा सलमान खानसँग भेट भयो, जसका कारण उनी सबै कुरा छोडेर परिवारका सदस्यबाट अभिनयको बहानामा भारत आएकी थिइन् । सोमा अली खान बलिउडमा नाम कमाउन चाहन्थिन् र सलमान खानसँग फिल्म खेल्न चाहन्थिन् । सोमा अली खानको सोच पनि सत्य भयो र दुबैले बु,लन्द नामक फिल्ममा संगै काम गरे ।
यो फिल्मका कारण यी दुईबीचको नि,कटता बढ्यो र यो बिन्दुमा पुग्यो कि दुवैले एकअर्कालाई धेरै मन पराउन थाले । त्यतिबेला भारतमा मात्रै नभएर पाकिस्तानमा पनि यी दुईको स,म्बन्धको चर्चा थियो । तर केही समयपछि के भयो थाहा भएन, दुवै एकअर्काबाट अ,लग भए।
सलमान खानसँग आजको समयमा कुनै कुराको कमी छैन, जसका कारण उनी निकै राम्रो जीवन बिताउँछन् । हालै सलमान खानकी प्रे,मिका सोमा अली खानको सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भइरहेको छ । किनकी सलमान खान सोमा अली खानको पहिलो प्रे,मिका थिइन। तर दुबैको फेरी ब्रे,कअप भयो । सोमा अली खानको जीवनमा सलमान खानपछि आजसम्म कोही आएका छैनन् । अहिले सोमा अली खान 46 वर्ष भन्दा बढी भइसकेकी छिन् तर अझै पनि कुमारी नै छिन्। सोमा अली खानजस्तै सलमान खानले पनि अहिलेसम्म विवाह गरेका छैनन।
७८ पटक हेरिएको
यी पो र्न स्टार जो २०२१ मा सर्वाधिक खोजिए
रक्सी खाएपछि नेपालीहरू किन अंग्रेजी बोल्छन्, वैज्ञानिक व्याख्या
नयाँ युवकसँग डेटिङमा सुष्मा कार्की, को हुन् त यी युवक ?
आजदेखि सवारीसाधनमा जोर-विजोर लागू